कांग्रेस शुक्ला अधिवेशनः सभापतिमा गोपीबहादुर निश्चित, रेग्मी उपसभापतिसहित गुरुङद्वारा अर्को प्यानल घोषणा – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun कांग्रेस शुक्ला अधिवेशनः सभापतिमा गोपीबहादुर निश्चित, रेग्मी उपसभापतिसहित गुरुङद्वारा अर्को प्यानल घोषणा – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun
८ आश्विन २०७८, शुक्रबार १८:५१
दुलेगौंडाः नेपाली काँग्रेसको शुक्ला नगर सभापतिमा गोपीबहादुर गुरुङ अधिवेशनपूर्व नै सर्वसम्मत घोषित भएका छन् । अधिवेशन अघि दुई फरक फरक समूहले सभापतिमा घोषणा गरे पछि उनी सर्वसम्मत हुने निश्चित भएको हो ।
यस अघि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट समूहले सभापतिमा प्यानल घोषणा गरेको भोलिपल्ट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल निकट समूहले गुरुङकै नेतृत्वमा अर्को प्यानल घोषणाा गरेको छ ।
नयाँ प्यानलमा उप–सभापतिमा कृष्णप्रसाद रेग्मी छन् । क्षेत्रीय सभापति किसान गुरुङको समर्थन रहेको उक्त समुहले गुरुङको नेतृत्वमा प्यानललै घोषणा गरेको हो । सो समूहबाट अर्को उप सभापतिमा भीमादेवी खत्री (मञ्जुं), सचिवमा शिवराज रेग्मी, दिपेन्द्र पौडेल, सह सचिवमा राजेश खनाल र भीष्म श्रेष्ठले उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन् ।
यस अघि वरिष्ठ नेता पौडेलनिकट प्यानलमा उप सभापतिमा बालकृष्ण पौडेल, सपना पराजुली, सचिवमा मदन श्रेष्ठ र धिरजविक्रम खाँडको नाम सार्वजनिक भएको थियो ।
रेग्मी सभापति लड्ने चर्चा भएका बेला गुरुङकै नेतृत्वमा उप सभापति रहने गरी प्यानल घोषणा भए पछि त्यहाँको राजनीतिमा नयाँ तरंग आएको छ ।
घोषणा कार्यक्रममा पार्टी क्षेत्रीय सभापति किसान गुरुङसहित नेताहरु कृष्णप्रसाद गौतम, कृष्णराज पण्डित, तरुण दल अध्यक्ष बिरु थापालगायत उपस्थित थिए ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको ८ आश्विन २०७८, शुक्रबार १८:५१ 121 Viewed